Fiji Airways na-akwado maka ụgbọ elu amaliteghachi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Fiji Airways na-akwado maka ụgbọ elu amaliteghachi
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Fiji • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Fiji Airways, Fiji's National Airline, ekwuola taa atụmatụ ya maka ịlaghachi na-efe efe ozugbo mgbochi oke ga-adị mfe na mkpa njem na-alaghachi. Usoro ihe omume eji eme njem na-akọwapụta nkwa ụgbọ elu ụgbọelu ichebe ahụike na nchekwa nke ndị ahịa ya na ndị ọrụ ya. Nke a gụnyere imepụta ọrụ ọhụụ nke ndị mmeri Ndị Nlekọta Ahụike Ndị Ahụike. Ọrụ a ga-ejikwa ma jigide ọdịmma, nchekwa ahụike ndị ahịa ma kwalite ịdị mma site na mmekọrịta ọrụ na ndị njem na ndị ọrụ nọ n'ụgbọ na ala maka ụgbọ elu ọ bụla na netwọk ụwa Fiji Airways.
Maazị Andre Viljoen, Fiji Airways Managing Director & CEO kwuru, sị: “Ndị otu anyị nọ n’ime ụlọ, gụnyere onye ndụmọdụ ahụike ụgbọelu anyị bụ Dr. Rounak Lal, na ndị ọrụ ahụike na ndị ọzọ metụtara ya na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta Fiji Airways Travel Ready. Anyị enyochala isi ihe mmekọrịta niile na Ahụmahụ Ndị Ahịa Fiji Airways, ma nara nduzi site na Healthtù Ahụ Ike Worldwa, obodo ntà na ICAO isetịpụrụ enwekwuru nchebe maka ndị ọbịa na ndị ọrụ anyị ma anyị bidoghachi ụgbọ elu mba ofesi. ”
Facemasks ga-abụ iwu maka njem maka ndị ahịa Fiji Airways na ndị ahịa Fiji Link mgbe ọ bụla ụgbọ elu mba ụwa kwadoro, a dụrụ ndị ọbịa ọdụ ka ha nwee ihe ndị a tupu ha erute n'ọdụ ụgbọ elu maka ịnyefe njem. Ndị ahịa niile kwesịrị idobe ihe nkpuchi ha ebe ọ bụla bara uru na njem ha niile, belụsọ obere ụmụaka na ndị na-enweghị ike ịme ya.
Ndị ọrụ niile na-eche ihu na ndị ahịa ga-eyi Ngwaọrụ Nchedo Onwe Onye (PPEs). Nke a gụnyere ụlọ ọrụ ire ahịa, ọdụ ụgbọ elu na ndị ọrụ ezumike, yana ndị ọrụ ụlọ. Imezigharị ọrụ na ahụmịhe ga-ebelata kọntaktị n'etiti ndị ahịa na ndị ọrụ mgbe ha na-ele ọbịa ụlọ ọrụ Fiji Airways dị iche iche.
Fọdụ n'ime usoro na ndụmọdụ maka ndị ahịa ụwa dị ka ndị a:
Ndị ahịa na-ejide kredit ga-enwe ike iji ndị a mee njem maka ụgbọ elu n'ọdịnihu na Fiji Airways - ruo 31 Disemba 2021. E nwere ike ịme ndokwa site na Ebe E Si Nweta site na Reservations Center, n'oge na-adịghịkwa anya Jikwaa ntinye akwụkwọ gị na weebụsaịtị.
Oghere oche oghere na ohere abanye ga-adị na Fiji Airways ọfịs ọfịs niile.
A dụrụ ndị ahịa ọdụ ka ha mara nke ọma banyere ozi dị ugbu a gbasara ihe a chọrọ maka ebe ha ga-aga site na ịga na Huby Travel Center na weebụsaịtị Fiji Airways.
A na-adụ ndị ahịa ọdụ ka ha ghara ije ụbọchị ha na-ejegharị, ka ha degharịa ụbọchị ọzọ. Enwere ike ịgọnye ndị ahịa anaghị aba n’ọdụ ụgbọ elu.
All Fiji Airways na Fiji Link ụgbọ elu na-enweta mmụba miri emi nke ọma kwa ụbọchị, nke gụnyere 'fogging' na ihichapụ akụkụ niile na ọgwụ ndị a kwadoro nke ọma, nke na-arụ ọrụ megide ụdị micro-organism dịgasị iche.
Ndị ahịa nwere ike ịtụ anya ịkwalite ahụike ahụike, gụnyere nyocha ọnọdụ okpomọkụ
A ga-emezi nkewapụ anya na nke mepere emepe n'ime ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu, yana ndị na-ahụ maka aka ga-adị maka ojiji.
A ga-edozi akpa niile enyochala tupu ebuba gị n'ụgbọ elu
Banye ga-eme site n'usoro oche (malite n'azụ ụgbọ elu maka Fiji Airways na n'ihu ụgbọ elu maka Fiji Link), iji belata kọntaktị n'etiti ndị ahịa.
A ga-eme ebe a na-ekewapụ ma na-anọpu ebe a na-anọ eme njem site na Fiji Airways Premier Lounge na ọdụ ụgbọ elu mba Nadi, na ndị na-ahụ maka ọrịa aka ga-adị maka ojiji
A ga-enye iri nri niile Ala Carte
A ga-etinye usoro ndị ọzọ, gụnyere ntinye akwụkwọ maka iji ụlọ ọrụ ịsa ahụ
A na-edozi ikuku n'ime ụlọ n'ụgbọelu ụgbọelu niile ma weghachite ya site na nzacha HEPA (High Efficiency Patrol Arrestors). Ná nkezi, ikuku dị n’ime ụlọ na-agbanwe kpamkpam kwa nkeji atọ ọ bụla. Nke a bụ ọnụọgụ dị elu karịa nke ndị mmadụ na-ahụ na gburugburu ime ụlọ ndị ọzọ.
A ga-edozichara lavatories ndị dị na mmiri nke ọma karịa mgbe ọ bụla, a ga-edozi ebe dị elu mgbe ọ bụla ụgbọ elu.
Ndị ahịa azụmaahịa ga-aga n'ihu na-atọ ụtọ nri ugboro atọ, na-enyefe ha n'otu tray.
A ga-eweta ọrụ nri dị mfe maka klas nke akụ na ụba na nri pụrụ iche 'nri maka echiche', nke na-ebelata kọntaktị n'etiti ndị ahịa na ndị ọrụ. Ngwunye a na-eme ka obibi obibi dị mma maka mkpofu, ọ ga-echekwa ihe ruru ọkara nde lita mmiri kwa afọ ma wepụ ihe ruru tọn plastik abụọ kwa afọ site na mmiri.
Magazin na akwụkwọ akụkọ agaghị adị na mmiri. Ndị ahịa ga-enweta ekweisi edozila na ngwugwu akara.
Ngwa eji enyere ndụ aka na klaasị azụmaahịa ga-agụnye facemasks emebere nke ọma, yana uwe aka na ngwugwu ịdị ọcha.
Na mgbakwunye na iwebata Ndị Ahịa Wellness Champions, ndị ọrụ ụlọ na ndị ọkwọ ụgbọ elu ga-azụrịrị maka ọrụ ụgbọ elu na COVID-19 ụwa njem, gụnyere njikwa nke nsogbu ahụike na ụgbọ.
“Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ usoro, omume na mgbanwe ndị ahịa na ndị ọrụ anyị nwere ike ịtụ anya maka nchebe ha. Anyị ga-aga n’ihu na ndị ndu anyị na ndị ọrụ ahụ ike na-eduzi anyị na mbọ anyị. N'ezie, anyị na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịmalite ihe dịka ọ dị mkpa ma ọ bụ dịka mba ndị anyị na-arụ ọrụ chọrọ. Otu ihe dị oke mkpa nke a ga-etinye n'ọrụ, mana ka amabeghị, bụ mmachi ntinye ma ọ bụ chọrọ maka Fiji na ebe ndị ọzọ na netwọkụ anyị. Nyere ọdịdị 'mmiri' a na-atụ anya nke COVID-19 metụtara oke chọrọ - yana iche iche iche ga-abịarute - anyị na-agba ndị ahịa niile ume ka ha mara nke ọma ihe ha ga-atụ anya tupu ha agaa njem njem njem. "
Maazị Viljoen gbakwunyere na a ga-ekpughere nchebe na ahụmịhe ndị ahịa na-atọ ụtọ pụrụ iche pụrụ iche na Fiji Airways n'oge na-adịghị anya. Nke a gụnyere nkọwa ndị ọzọ gbasara ọrụ nke ndị Nlekọta Ahụ Ike Ndị Ahịa, yana ịgbasa mmeri nke ụgbọ elu meriri Lailai Land ngwaahịa ụmụaka na ọrụ njem nlegharị anya a ma ama.
Fiji Airways ga-echere nkwenye n'aka ndị ọchịchị Fiji na ahịa ahịa ya dị mkpa tupu ị na-ekwupụta usoro ụgbọ elu mba ụwa. Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ elu mba ofesi ka akwụsịtụrụ site na njedebe nke July 2020.